နှုတ်ခမ်းတမျိုးတည်း အတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ ဘက်စုံအသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ့် NIVEA ရဲ့ Lip Balm!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » နှုတ်ခမ်းတမျိုးတည်း အတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ ဘက်စုံအသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ့် NIVEA ရဲ့ Lip Balm!!
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင့်။ အေးချမ်းလှတဲ့ ဆောင်းရာသီလေးကို မကြာခင်​ရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်လို့ အသားအရေအတွက်သာမက နှုတ်ခမ်းသားတွေပါ မခြောက်သွေ့အောင် ဂရုပြုရတော့မှာပါ။ ဒီတော့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ အချိန်ကြာရှည်စွာ စိုပြေပြီးလှပနေဖို့ဆိုရင် NIVEA ရဲ့ Lip Balm လေးတော့ ဆောင်ထားသင့်တယ်နော်။
Lip Balm Essential Care ကို Shea Butter, Jojoba Oil တို့နဲ့ အဓိကထား ဖော်စပ်ထားတာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားကို ၁၂ နာရီကြာ စိုပြေစေပြီး နူးညံ့စေပါတယ်။ စေးကပ်ခြင်းလည်း မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် အသုံးပြုတဲ့အခါ စိုပြေပြီး အကြိုက်တွေ့စေမှာ အမှန်ပါပဲ။ နှုတ်ခမ်းသားခြောက်ခြင်း၊ ညိုမည်းခြင်းတွေကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အပြင် လက်သည်းတဝိုက်မှာ ရာသီဥတုကြောင့် ခြောက်သွေ့ခြင်း အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
နောက်တခုက ရှုပ်ပွနေတဲ့ ဆံသားတွေကိုလည်း ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အပြင် မျက်ဝန်းတဝိုက်အလှပြင်တဲ့အခါ ပိုမိုကြာရှည်ခံစေရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီပိုမိုကြာရှည်ခံချင်ရင်လည်း Lip Balm လေးအရင်ဆိုးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်နော်။ ဆောင်းရာသီအတွက်သာ မဟုတ်ပဲ အဲကွန်းအသုံးများတဲ့ ရုံးခန်းအတွင်း အလုပ်လုပ်သူများအနေဖြင့်လည်း ပုံမှန်အသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတချက်အနေနဲ့ ဖိနပ်မပေါက်အောင် Lip Balm အနည်းငယ်ကို ယူပြီး ကြိုတင်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လည်း ဖိနပ်ပေါက်ခြင်း ရန်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
နှုတ်ခမ်းတမျိုးတည်း အတွက်သာ မဟုတ်ပဲ ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်တဲ့ NIVEA Lip Balm Essential Care ကို ၂၅၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်ဖြင့် NIVEA Counter, Super Market များတွင်အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့်လည်း သင့်တော်ပြီး ဘက်စုံအသုံးဝင်တဲ့ Lip Balm လေးကိုတော့ သုံးရာသီလုံး အသုံးပြုနိုင်အောင် ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်နော်။